Valanaretina sy famoaham-baovao :: Torohan’ireo Eveka katôlika ny fampiasan-diso ny tambajotran-tserasera • AoRaha
Valanaretina sy famoaham-baovao Torohan’ireo Eveka katôlika ny fampiasan-diso ny tambajotran-tserasera
Miantefa manokana any amin’ireo mpikatroka politika, amin’izao fotoan-tsarotra iainan’ny firenena eo ampiatrehana ny ady amin’ny valanaretina coronavirus izao, ny hafatry ny Fiombonamben’ireo Eveka ao anivon’ny Eglizy Katôlika Apostolika Romana eto Madagasikara (EKAR). Voatoroka manokana ny fampiasana amin’ny tsy tokony izy an’ireo tambajotran-tserasera izay hanaparitahan’ny sokajin’olona sasany an’ireo vaovao diso momba ny valanaretina eto Madagasikara.
« Ilaina ny tsikera am-pitiavana hahatsara zavatra fa aoka kosa hatsahatra ny fankahalana mitarika fifandranitana sy fifanaratsiana tsy hitera-bokatsoa. Aoka isika hifampatoky », hoy ny antson’ireo Eveka. Miendrika fampirisihana ny rehetra hahay hiray hina sy hifanome tanana ny hafatra, araka ny fanambarana nataon’izy ireo, tamin’ny alakamisy ary notaterina, omaly. « Aoka re mba hampandeferina ny hambom-po diso toerana ary tsy afangaro ny adilahy politika ny tolona ara-pahasalamana izay hiarahantsika miatrika », hoy ny fanambaràna.
Manoloana ny fitsapana mahery vaika eran’izao tontolo izao no hanaingan’ireo Eveka ny fitodihana hatrany amin’Andriamanitra sy hitafiana fahendrena hivoahana ao anatin’ity hamehana ara-pahasalamana ity. Mahatsapa ny fahazoan’ny tambajotran-tserasera sosialy laka tanteraka izy ireo. Misongadina ny filàna mampiseho fahendrena amin’ny tsy hampitana vaovao diso mampikorontana ny fiainambahoaka, izay efa trotraky ny tahotra sy ny adim-piainana.
Nohamafisin’ny fiombonamben’ireo Eveka katôlika fa soa iombonana ny fahasalamana ka tokony harovana fatratra. Nidera sy nampirisika an’ireo mpikaroka malagasy amin’ny fikarohana vahaolana hoentina mitsabo ny coronavirus koa izy ireo. Toy izany koa ny fiantsoana ny fitondrampanjakana amin’ny fijerena vahaolana amin’ny fisaboana an’ireo aretina hafa, toy ny « dengue » sy ny tazomoka.
Ankoatra ny fanamafisana ny ady mila atao amin’ny kolikoly eto amintsika, tahaka ny fisian’ny fanodinkodinana an’ireo fanampiana ho an’ny sokajin’olona samihafa, dia nanao fangatahana manokana momba ny fijeren’ny fitondrampanjakana ny lafiny fandaharam-pampianarana ireo eveka katolika.
Fiaraha-mientana :: Mitaky an’ireo « Îles éparses » ny Antenimieram-pirenena
Famatsiana :: Mangataka fampidinana ny vidin-tsolika ireo loholona